Enye inkonzo ye-Apple ayisebenzi? Sikubonisa indlela yokujonga imeko | Ndisuka mac
Ngaba ikhona inkonzo ye-Apple engasebenzi? Sikubonisa indlela yokujonga imeko yayo
Namhlanje, ukuthembeka kwezicelo yenye yeempawu abasebenzisi abazixabise kakhulu. I-Apple isizisela usetyenziso okanye imisebenzi emininzi kwindalo yayo. Ukusuka kwiapp okanye ivenkile yomculo, iifoto zokuvumelanisa, okanye abafowunelwa kunye neziganeko. Uninzi lwazo lufuna ukusebenza ngokufanelekileyo kweeseva zika-Apple. Lo ngumsebenzi wangaphakathi weApple, ukuze abasebenzisi beApple baneliseke ngokupheleleyo. Kodwa Ungayibona njani ukuba ingxaki ivela kuApple okanye sisoftware okanye izixhobo?
Kulula kakhulu ukujonga imeko yezi nkonzo, kodwa kufuneka sazi ukuba kuphi. Ukuba ufikelela koku kulandelayo unxibelelwanoUya kuba nakho ukujonga ukuba zeziphi iinkonzo ze-Apple okwangoku. Nangona ndivela eMac siza kuba neli phepha ukuze ukwazi ukubonisana neenkonzo, ukuba ukhetha ukufikelela ngokwakho, ngoku siyakuxelela ukuba kanjani.
Uninzi lweenkonzo ezixhomekeke kwiakhawunti ye-iCloud, yiyo loo nto iphepha lesimo senkqubo likwiphepha lokuqala lephepha. Kwimeko apho ungazi, iphepha www.icloud.com
Ezantsi, sifumana ikhonkco kwiNqanaba leNkqubo. Cinezela kwaye uya kuyifumana.
Ukusebenza kwenkonzo kulula. Ngolandelelwano lwealfabhethi zonke iinkonzo. Namhlanje kukho iinkonzo ezingama-52. Olu luhlu luqala ekusebenzeni kwevenkile yeApple yokukhuphela usetyenziso, umculo kunye nomnye umxholo, ngokusebenzisa izicelo ezinje ngeMaphu, iApple Pay kunye nokuphela kweenkonzo zamafu zika-Apple: abafowunelwa, ikhalenda, amaxwebhu eICloud.
Ke ngoko, ukuba ubona ukuba inkonzo iluhlaza, ngokomgaqo inkonzo ye-Apple isebenza ngokugqibeleleyo. Kwiimeko ezininzi, ngokucima izixhobo nezixhobo, uya kuyisombulula ingxaki yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ngaba ikhona inkonzo ye-Apple engasebenzi? Sikubonisa indlela yokujonga imeko yayo
Yenza iiflaya ngokukhawuleza ngezi templates zobungcali
Guqula iividiyo zenze ii-GIFs ngeVidiyo yeGIF yoMdali